विश्व नेतृत्वको ज्ञान नेपालबाट
यो ग्रन्थ ३८९ पृष्ठमा प्रस्तुत छ । यस ग्रन्थभित्र अति महत्वपूर्ण सोध र जिज्ञासाका विषयहरुको तर्क संगत र वैज्ञानिक ढंगबाट व्याख्या गरिएको छ । जसमा सुख दुःखको कारण अनुसन्धान, ध्यानको सिद्धान्त, परमात्माको व्याख्या, साहित्यको सिद्धान्त, शान्ति र आनन्दको सिद्धान्त, सार्वभौम धर्म÷दर्शनको सिद्धान्त लगायत ४४ वटा मूल प्रसङ्गमा लेखिएको यस ग्रन्थमा विविध प्रसङ्गहरु १०८ वटा छन् । सबै भन्दा मर्मस्पर्सी पहिलो भगवानको आवाज शीर्षकमा भएका १०५ वटा भगवत् वाणीहरु अत्यन्त गहन र आनन्ददायक छन् । बाँकी सबै ज्ञानहरुले वर्तमान संसारमा प्राप्त ज्ञानहरुमा विशिष्टता हासिल गरी थप विशेषताहरु पस्किएको पाइन्छ । सम्पूर्ण अध्ययन पश्चात सार्वभौम अध्यात्म सनातन दर्शनको महानता हो भन्ने लाग्छ । सबै धर्म, दर्शन, वाद र अध्यात्महरुलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने लक्ष्यमा यो ग्रन्थ प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
२. सार्वभौम युगको विश्व विधानः–
यो ग्रन्थ ५८० पृष्ठमा प्रस्तुत छ । यसमा १०१ वटा मूल प्रसङ्गहरु छन् । विश्व व्यवस्थापन गरी युग परिवर्तनको महान लक्ष्यलाई यसले प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दछ । सार्वभौम विश्व सरकारको गठन गरी संसारलाई एउटै राजनैतिक छातामुनी राख्नु यस ग्रन्थको स्पष्ट लक्ष्य देखिन्छ । यू.एन.लाई विश्व सरकारमा परिवर्तन गर्ने उपायहरुको यसमा व्याख्या गरिएको छ । यसमा पहिलो खण्ड राजनीति, दोस्रो कूटनीति, तेस्रो कानून त्यस्तै शिक्षा, अर्थशास्त्र गरी विश्व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै पक्षहरु बारेमा वृहत्तर उपायहरुको व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यस ग्रन्थ अध्ययन गर्दा भविष्यमा भ्रमण गरिरहेको महसुस हुन्छ । हरेक शीर्षकको समाप्तीमा अलग साहित्य विधा “सत्य साहित्य” को प्रस्तुती अति मार्मिक लाग्दछ । यो ग्रन्थ देश÷देशका संविधान जस्तै तर सैद्धान्तिक र भावातित अभिव्यक्ति सहितको साँच्चै विश्व विधानको रुपमा पाठकले महसुस गर्न सक्छन् ।
३. सार्वभौम विज्ञानः–
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाः–
आधुनिक युगको विश्व नेतृत्व सार्वभौम ज्ञानले लिन सक्छ भन्ने लागेको छ । नेपालबाट निस्किएको यो ज्ञानलाई विश्व सामु पु¥याउनु हामी सबैको कर्तव्य सम्झेको छु ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २९, २०७३ १९:४७:४४